« Te hihavana amintsika Andriamanitra»
Malala il y a 3 mois
Fiomanana amin’ny fankalazana ny Paka ny Karemy. Fiomanana mandritra ny efapolo andro, ao anatin’ny vavaka sy fahanginana, ombana asa fivalozana famolahan-tena. Jesoa Kristy nitokana irery efapolo andro tany an’efitra ary nalain’i Satana fanahy no evanjely atolotry ny litorjia ho fanombohana izao Karemy izao;
« Sitrana ny boka !»
Ny fanasitranan’i Jesoa boka anankiray nitalaho fanasitranana taminy no tantarain’ny evanjely androany (alahady tsotra faha-6B). Fampianarana atolotra etoana hanaraka antsika mandritra ny herinandro.
Herinandro fiaraha-mivavaka 2021
Haja il y a 3 mois
“Jesoa Kristy no fototry ny firaisantsika sy ahafahantsika miray amin’Andriamanitra ary iraisantsika samy isika”, hoy ny Papa Joany Paoly Faharoa.
Asongadin’ireo vakiteny masina androany ny fomba fiatrehan’ny olona mivavaka sy mino an’Andriamanitra ny fijaliana sy ny fahasahiranana eo amin’ny fiainana...
« Iza i Kristy amintsika »
Taorian’ny niantsoany ireo mpianany efatra mirahalahy voalohany dia nanohy ny diany i Jesoa. Fampianarana entina mamakivaky herinandro vaovao. Tonga tao Kafarnaoma Izy sy ny mpianany. Amin’ny maha Jody sy mpiara-monina amin’ny Jody Azy dia niditra tao amin’ny Sinagoga Izy ny andro Sabata ary nampianatra ny olona tao amin’ny Sinagoga… Araho ny tohiny.
Diakra: mpanao ny raharahan’i Kristy fa tsy fonksionera
Emma il y a 3 mois
Tovolahy roa no niroso eo amin’ny laharan’ny diakra ny alakamisy 21 janoary teo ao amin’ny Fikambanana “Congrégation de la Mission “ na Lazaristes, tao Fianarantsoa. Toa an’i Kristy, tonga mba hanompo ny Diakra. Ny fiainantsika manontolo no tompoiny mba ho eo anivontsika tokoa i Jesoa.